jumlada2019-NCOV soosaarayaasha xirmooyinka kiimikada 'Antigen' deg deg ah | Immuno
Loo Adeegsaday COVID 19 Tijaabada Antigen
Xirxirida 20 xirmooyinka tijaabada / Sanduuqa wax lagu rido 50 Khaanadaha / Kartoonka Cabbirka Kaartonka: 64 * 44 * 39cm
Qalabka Imtixaanka ee loo yaqaan 'IMMUNOBIO 2019 Coronavirus Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method)' waa waji adag oo tijaabo ah oo lagu ogaanayo tallaalka degdegga ah, ee tayada leh ee lagu ogaanayo COVID 19 antigen ee ka yimaada Coronavirus ee muunada sanka / Saliva swab.
Qalabka Immuno 2019 Coronavirus Antigen Test Kit ayaa loo isticmaalaa baaritaanka hordhaca ah natiijooyinka baaritaanka ugu wanaagsanna waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo lala xiriirinayo baaritaanka caafimaad ee isbitaalka.
Qalabka Imtixaanka ee loo yaqaan 'IMMUNOBIO 2019 Coronavirus Antigen Test Kit' wuxuu u isticmaalaa suufka sanka ama saliva candhuuf ahaan muunad ahaan. Labada tijaabo labadaba waxaa loo isticmaalay tijaabada Antigen oo leh xasaasiyad aad u sarreysa iyo gaar ahaaneed
A. IMMUNOBIO 2019 Coronavirus Antigen Test Kit waxay ku tusi kartaa soocelinta tijaabada mudo ah 10-15 daqiiqo gudahood
B. Iyadoo in ka badan 95% xasaasiyad iyo gaar ahaaneed
C. Ku habboon oo dhakhso leh, oo aan dib loo soo celin qalabka baaritaanka, xitaa waa lagu tijaabin karaa guriga
D. Lagu dabaqi karo tijaabada sanka iyo candhuufta labadaba
E. Muunado Yar ayaa ku filan, in yar oo sanka ah ama qoorta ah
1. Iyada oo shahaado CE / ISO13485
3. Liiska Caddaanka Shiinaha
1. OEM / ODM oo loogu talagalay xirmooyinka tijaabada 2019-NCOV Antigen waa la heli karaa
2. Xidhmada Keena Kaladuwan ee Kala-Bixinta 2019-NCOV, IGG / IGM TEST, Imtixaanka Angtine, Baaritaanka Antibody
4. Sii taageero farsamo iyo tababarro wax soo saar oo loogu talagalay xirmooyinka tijaabada ee Conornavirus 2019
5. Xaashida Bixinta Keena ee xirmada tijaabada 2019-NCOV
Su'aasha 1aad: Ma heli karaa COVID 19 shaybaarka xirmada tijaabada ka hor amarka ciyaarta?
J: Haa, waxaan bixinaa xirmada tijaabada ee COVID 19
Su'aasha 2aad: Waa maxay tirada dalabka minimun ee sanduuqa tijaabada-2019?
J: Ma jiro shuruudo MOQ ah, laakiin waxaan kuu soo jeedin doonnaa tirada ugu fiican ee la raaco iyadoo loo eegayo qiimaha freigtht
Su'aasha 3aad: Caddayn noocee ah ayaad u haysataa 2019-ncov tijaabo deg deg ah xirmo?
J: CE / ISO13485 / Liiska Caddaanka Shiinaha
J: Waxaan joognaa Hangzhou, Alibaba sidoo kale halkan ayaan ku yaalay, nus-saac waxaan uga jirnaa Shanghai tareen xawaare sare ku socda. Waa lagugu soo dhaweynayaa markasta oo aad na soo booqato ..
Su’aal 5: Sideen u bixin karaa?
Su’aal 6: Aaway suuqaagii weynaa?
J: Yurub, Southafrica iyo Chines Mainland
Hore: Imtixaanka cusub ee coronavirus Antigen 2019
Xiga: 2019-ncov xarigga tijaabada antigen degdega ah
2019-ncov tijaabo deg deg ah
Qalabka tijaabada 2019-ncov
baaritaanka cudurka coronavirus
cusub coronavirus 2019-ncov dual
Qalabka baaritaanka Antigen ee degdega ah